Nolosha: Tiro koob xiiso leh | Somaliska
Nolashu waa mid isbedal badan balse waxaa jira waxyaabo joogto ah oo aad sameyso maalin walba. Ma ogtahay haddii laysku xiro dhirirka tintaada in ay gaari karto 950km?
Telefishinka National Geographic ayaa tiro koob xiiso badan oo uu ku sameeyay nolosha bani’aadamka ku soo bandhigay nambaro isku celcelis ah oo xiiso badan. Tiro koobkaan waxa uu quseeyaa dadka ku nool nolosha reer galbeedka.
– Taariikhda dhalashadaada waxaad la wadaagaysaa 17 milyan oo qof.
– 10-ka sano ee ugu horeysa iskuulkaaga waxaad yeelaneysaa 17 asxaab ah. Balse marka aad 40 gaadho waxaa ka soo haraya 2 oo keliya.
– Tintaada kobaceedu waxa uu gaari karaa 950km
– Isku celcelis maalintii waxaad qosleysaa 18 jeer
– Socodkaaga lugta waxa uu 3 jeer ku soo wareegi karaa dhulka
– Waxaad cuneysa qiyaastii 30 ton oo cunto ah.
– Isku celcelis 10 sano oo noloshaada ah ayaad shaqo ku dhameysaneysaa.
– 20 sano hurdo ayaad ku dhameysanaysaa.
– 3 sano waxay kaaga baxaysaa suuliga.
– 7 bilood waxay ku dhamaanaysaa sugitaanka gaadiidka dadweynaha.
– 2 bilood waxay ku baxaysaa inta aad qof telefoonka ku sugeyso.
– 12 sano waxay ku dhamaansayaa daawashada teleshinka.
– 19 maalmood waxaad ku bixinaysaa raadinta remooka tv-ga.
Adiga waxa la dhihi kara hadalan waa qiyas sababto ah lama ogan karo qofka inta u cimrigisu garayo qar aya 100 dhafa qar aya saqirnimo ku dhinta arintan waxa ka dhiman tusale ahan qofki 40 gara wuxu cuni kara intas wuxu hurdi kara intas balse dadka o dhan isku mid aya laga dhigay aniga sidas ayan u fahmay shekada hadan wax qalday rali halaygo noqdo wayo waxan ahay bani adam
Waa Waxyaabo Iska Qiyaali ah runtii , haddii loo eego , 20 Sano oo Hurdu ah , Muslim Aakhiro iyo Xisaab sugee , maseexdo , Balse Gaal iska NOOL waa awoodaa , ————–Hadalka Kiisa Anfaca Dadka u leh ayaa ka QIIMO Badan , hadal badan oo aan TAYO lahayn , Walaalkeen Jimclaae , waad ku mahadsantahay qoraalkaa noosoo Gudbisay , Balse waxaan kaa Codsanaynaa , kuwa Anfaca Noo leh .
Waa idin salamay dhamaantiin walalahayga somaliyed melkasto adjogtan inta kadib shekadan okale waxa loyaqan hadal tiro yacani waxan rad lahayn anagana nama quseyso hadan nahay muslimin nabad galyo
oo aawey in tuu Qofku ama Cibaado ku maqnaa, ama, CIYAAR-SPORT- KU MAQNAA, AMA SEXYTIME KU JIREY, AMA DANCE SAMEEYNAAYEY, AMA DALXIIS KU JIRAY, AMA DOOD KU JIRAY, AMA AMA …. kolley waa shaqsiyaad nolo shoodu ciriiri tahay ku wa waxaan looga qisaas qaatey…
walaalaheeyga sidaad sheegteen markii horanaba lagu sheegay qoraalka bilowgiisa sheekadaan waxa eey quseeysaa reer galbeedka anigana waan idinku raacsanahay laakiin maadaama ay jimcaale ama qofkii soo qorayba waqti u galiyey anagana aqriskeeda waqti nooga baxay waxan qabaa inaan sikale uga faa’ideeysan karno taasna waxa ay tahay in uusan cimrigeenu hadii aanahay umada nabi Moxamed SCW in uusan cimrigeenu sidaas usii dheereeyn uu rasuulku SCW ku sheegay inta u dhaxeyso 60-70 marka aniga sheikh idin wacdinaa ma ahi oo adinkaa iga badiyo laakiin ilama aha inaan heysano cimri sidaas usii dheer oon isku haleyno marka ilaaheey dhamaanteen hana waafajiyo hanuunka hana naga dhigo kuwii hadalka dhageysta kiisa wanagsanna qaata wsc wr wb
waa been cad ilaahaybaa og